Factory kilalao ankizy |China Kids kilalao Manufacturers, mpamatsy
Kilalao Fidget miloko mampihomehy Mametraka Kilalao Fidget Popit Fidget Tsotra Bubble
Ny kilalao pop it fidget miaraka amin'ny keychian dia mety amin'ny kitapo kitapo, fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny / fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana / fanomezana Halloween / fanomezana Krismasy ho an'ny namana, fianakaviana, ankizy, mpiara-miasa.
Izy io dia kilalao fidget tsara ho an'ny olona voan'ny autisme, ny zokiolona, ​​​​ny olon-dehibe ary ny ankizy mila manala ny adin-tsaina.Izany dia hanampy amin`ny fomba mahomby mba hanamaivanana ny tebiteby sy ny adin-tsaina, hamerina ny toe-po."Pop, Pop, Pop" dia toa mahafinaritra sy tsy misy dikany.
Anaran'ny vokatra: Kilalao kely Pop it Fidget
endrika: Efajoro, mahitsizoro, boribory, fo, octagon
Fonosana: Kitapo ambony + baoritra
Vidin'ny singa: 0,12-0,77 USD
Kilalao 2021 Fidget sensory fanabeazana kilalao Tangram Puzzles Push Bubble Sensory Pop Fidget It kilalao ho an'ny ankizy sy olon-dehibe
Fiarovana ara-pitaovana: Ny kilalao bubble silikôla dia vita amin'ny silikônina avo lenta, miaraka amin'ny akora tery, famolavolana iray, fikasihana malefaka, malefaka, sariaka ny tontolo iainana, azo sasana, mateza, ary azo ampiasaina sy diovina mandritra ny fotoana maharitra.
Vita amin'ny silicone kilasy sakafo, matevina kokoa noho ny ankamaroan'ny mpivarotra, mora diovina.Ankafizo ny push popping.
Silicone Push Pop Fidget Rainbow Fidget gel Sensory kilalao mipoitra ho an'ny ankizy sy olon-dehibe eo anivontsika
Mora entina: Ny kilalao fidget pop bubble fidget dia azo ampiasaina indray ary azo sasana mandritra ny fotoana maharitra ary tsy misy fisarahana na tapaka. Azo atao anaty fiara, fiaramanidina, trano fisakafoanana, lasy, sekoly, birao ary na aiza na aiza.
2021 Kilalao Ankizy Fidget Kilalao Push Bubble Simple Sensory Pop Fidget It Kilalao Kilalao ho an'ny Ankizy
Silicone azo antoka tanteraka- Tsy misy poizina, tsy misy tsirony, tsy hiteraka fahavoazana ho an'ny olombelona sy ny biby fiompy. Azo ampiasaina sy azo sasana koa.